Mourinho Runta U Sheegay Shaw: "Daafacasho Fiican Ma Sameysid" %
Mourinho Runta U Sheegay Shaw: “Daafacasho Fiican Ma Sameysid”
Luka Shaw ayaa wuxuu Jose Mourinho uu kula loolamaya go’aankii uu macalinkiisa uu ku bedalay qeybta labaad kulankii FA Cup oo ay la dheeleen Brighton iyo sababta uu mar walba keydka ugeliyo isaga, sida laga soo xigtay wararka.
Daaafacaan dambeedka bidix ka dheela ayaa waxaa la bedalay kulankii FA Cup-ka daqiiqadii 45aad, iyadoona Mourinho uu umuuqday mid aanan ku farax-saneen muuqaal ciyaareedka uu garoonka ka sameynayay xidigaan.
Majalada Daily Mail ee kasoo baxda wadanka Spain ayaa sheegeysa in Shaw uu Mourinho weydiiyay su’aashaan kadib kulan ay yeesheen macalinkaan reer Portugal iyo waliba qaar kamid ah xidigaha ugu muhiimsan Red Devils shalay.
Daafaca udhashay wadanka England ayaa wuxuu su’aalay maamulahii hore ee kooxda Real Madrid iyo kuwa kale oo bdan: “Maxaa anigalee aad mar walba iisoo xulataa [keydka bedalka iyo waliba wax walba”.
Mourinho oo ujawaabaya Shaw ayaa wuxuu usheegay in uusan sameyn in ku filan oo daafacash ah, taasina sababta ay tahay sababta uu mar walba keydka udhigayo, islamarkaana uusan kusoo bilaabin shaxdiisa.
Isla hadalkaan ayuu Mourinho sheegay intii uu fadhiyay shirkiisa jaraa’id ee kadib ciyaartii FA Cup-ka, markaasoo la weydiiyay sababta uu 22-sano jirkaan ugu bedalay wiilka Jookarka u ah Manchester United ee Ashley Young.
Daily Mail ayaa waxay hadalkeeda ay intaas ku dareysaa in qeylada uu Mourinho ku canaanayay Shaw laga maqlayay banaanka qolka labiska ee Man United.
Shilkaan ayaa wuxuu ahaa waxyaabaha halista ah ee dhawaanahaan wax laga weydiinayay Mourinho, kaasoo si aan caadi ahayn ugu hor canaantay warbaahinta iyo bulshada hortooda.
Manchester United macalinkeeda wuxuu fahansan yahay inuu shaki badan uu ku jiro mustaqbalka Shawo, islamarkaana uu ubaahan yahay inuu si farsamo ahaan isku hormariyo.
Sikastaba, xaalka Luka Shaw ayaa waxay tahay mid aan la filayn ama aan la saadaalin karin halka ay ku dambeyn doonto, isagoona waqti xaadirkaan kaliya kusoo bilowday kulamada xagaagan ee Premier League Lix kulan, waxaana macquul ah inuu baxo xagaagan.
“Ronaldo Goosha Marka La Joogo Waa Dilaa” – Buffon
Ronaldinho Shaaciyay Midka Fiican Messi Iyo Ronaldo